Kedu ụwa telephony na-echere anyị n'etiti ugbu a na njedebe nke afọ | Gam akporosis
Kedu ụwa telephony na-echere anyị n'etiti ugbu a na njedebe nke afọ
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, Huawei, Samsung
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ihe karịrị ọkara afọ 2019 agafeela, ọ bụrụ na anyị akwụsị iche ọtụtụ ọnụego ewebatala taa, anyị nwere ike ịhụ otu site na ndepụta ahụ, a ka nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụ ọnụ, ọnụ ọnụ dị ka iwu n'ozuzu A na-akpọ ha ka ha bụrụ ntụaka n'ime mpaghara ahụ, opekata mpe ha kwesịrị.
Ekwuru m na ha kwesịrị, n'ihi na n'etiti ụlọ ọrụ ndị na-enweghị obi ike ịmalite ụdị ngwaahịa ọhụrụ ha maka afọ a, anyị na-ahụ Apple, Google, Samsung, Huawei ... ọ bụ ezie na ndị a raara onwe ha nye na-eweta ọnụ na afọ niile, ka ọ were Anyị nwere ike wepu ha na listi kachasị atụ anya.
Anyị nwere ike mana anyị agaghị eme n'ihi na ụlọ ọrụ abụọ ewepụtabeghị nnukwu ngwa agha ha niile ezubere maka 2019, dị ka Huawei Mate 30, abụọ na nsụgharị ha dị iche iche, na ịghara ịkọ ma Galaxy Fold na Huawei Mate X, na-atụgharị ọnụ na dị ka ọtụtụ asịrị, ga-abanye ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ.
1.1 iPhone XI (ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-akpọ ya)
2.1 Google Pixel 4 na 4 XL
2.2 OnePlus 7T na OnePlus 7 Pro
3.1 Nokia 9.1 Dị Ọcha
iPhone XI (ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-akpọ ya)
Apple kwadoro awa ole na ole gara aga ụbọchị ngosipụta nke iPhone ọhụrụ maka 2019. Ọ ga-abụ Septemba 10 na-esote mgbe Apple gosipụtara maThe iPhone ọhụrụ dị ka ọgbọ na-esote iPad Pro (ikekwe igwefoto atọ dị ka 2019 iPhone), Apple Watch Series 5, ma eleghị anya ọhụrụ 16-anụ ọhịa MacBook Pro.
Ihe kachasị ọhụrụ anyị ga-ahụ na iPhones ọhụrụ dị na ngalaba foto, ebe ọ bụ na ọtụtụ asịrị na-egosi na ọnụọgụ igwefoto ga-abawanye na atọ, na-agbaso otu ụzọ ahụ Huawei na Samsung na-agbaso ugbu a. ha aburula aka maka ekwenti mebere na mpaghara foto.
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, Huawei enweghị ihe ekwuru nke ọma. Ihe mgbochi ndị gọọmentị America kwupụtara na May nwere mmetụta siri ike na ahịa ya na mgbakwunye na ịgha mkpụrụ obi abụọ nke ntụkwasị obi na ndị na-eso ụzọ ụlọ ọrụ ahụ. Ihe mgbochi a, nke na tiori kwusiri na njedebe nke August, o yiri ka n'eziokwu ọ bụghị, a gbatịpụrụ ya ọnwa atọ ọzọ.
N'ụzọ dị otu a, o yikarịrị ka ọ bụrụ na veto gaa n'ihu otu a, na ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ọ ga-, ohuru Huawei Mate 30 enweghi ike ijikwa Google na ihe niile gbara gị gburugburu, ya mere ọ ga-abụ ihe na-ada ụda maka ire ahịa n'ọdịnihu nke njedebe ọhụrụ a dị elu site na ụlọ ọrụ Asia, ọnụ na, dị ka onyinyo dị n'elu, ga-enye anyị igwefoto atọ n'azụ.
Ka ọtụtụ ọnwa gachara, Huawei's foldable smartphone, Nwunye X, lee ìhè tupu njedebe nke afọ, ọ bụ ezie na ihe niile Ọ ga-adabere na mmalite nke veto nke gọọmentị America na ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụrụ na ịnweghị ike iji gam akporo, a ga-amanye gị ịnakwere HarmonyOS, Huawei sistemụ arụmọrụ nke ezubere maka smart ngwaọrụ ọ bụghị maka smartphones na mbadamba.
Nsogbu dị iche iche na ihuenyo nke Galaxy Fold gosipụtara mgbe e zigara ya na mgbasa ozi teknụzụ dị iche iche, mere ka ụlọ ọrụ ahụ gbuo oge ịmalite ya ruo mgbe ebighị ebi. N'oge ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ edozila nsogbu ndị ahụ na ihuenyo ahụ, ya mere ọnụ ya dị njikere ịga ahịa.
Ee ee, ọ ga-ebido na South Korea na Ọ ga-abụ na Septemba 6. N'oge a anyị amaghị ụbọchị mwepụta ma na Europe ma na United States na Latin America. Eleghi anya, ụlọ ọrụ Korea ga-ejedebe mmalite nke mba ya iji hụ akụkọ izizi sitere n'aka ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ha dị mma, Ohere inweta bụ na ụbọchị ntọhapụ na ndị ọzọ nke ụwa agaghị adị ogologo oge.
Google Pixel 4 na 4 XL
Asịrị ndị gbara ọgbọ ọhụrụ nke Google Pixel gburugburu, mere ka ụlọ ọrụ ahụ bipụta nsụgharị nke ihe azụ ya ga-adị. Akụkụ azụ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ igwefoto dịkwuo elu, ihe Apple ga-eme na iPhone 2019 ọhụrụ na nke ahụ ọ na-egosi na omume nke Samsung na Huawei ama adiaha.
Banyere imewe ahụ, dị ka oyiyi dị n'elu, o yiri ka ọ dị na Google Ha ewepụla ọkwa a iji gbasaa ogo ya wee si otú a nwee ike ịgụnye usoro nnabata ihu nke ga - emekwa ka anyị nwee ike ijikwa ama na - enweghị mmetụ ya aka n’oge ọ bụla. Ihe doro anya bụ na Google na-eme sistemụ arụmọrụ dị egwu maka ọdụ ha, mana n'ihe gbasara imewe, ha na-eme ya mgbe niile.
OnePlus 7T na OnePlus 7 Pro
Agbanyeghị ụbọchị a kapịrị ọnụ maka ngosipụta nke ndị ọhụụ ọhụrụ site n'aka ndị nrụpụta, a na-eme ya ka ọ bụrụ izu otu izu gara aga, ọ dị ka ụmụ okorobịa na OnePlus nwere nke doro anya ma nweela ụbọchị nke Ọktọba 15 debeere na kalenda ha iji mee ngosi nke ihe ọgbọ ọhụrụ nke OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro.
Ọgbọ ọhụrụ a ga - esonye na nsụgharị ka mma nke Qualcomm's Snapdragon 855 ma soro 8 GB nke RAM na ụdị dị ọnụ ala. Banyere nhazi na ihe ndị ọzọ, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na anyị agaghị achọta ihe ọhụụ ọ bụla nke na-adọta nlebara anya pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ imegharị ochie gị OnePlus, ị nwere ike ichere maka ọgbọ ọzọ ma ọ bụ chere maka mwepụta nke ọhụrụ na jiri uru nke ọnụahịa nke ụdị ugbu a.
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na e gosipụtara Xiaomi Mi Mix 3 na Ọktoba afọ gara aga, ihe ezi uche dị na ya bụ ịtụ anya na Ọktoba 2019 a ga-eweta ọgbọ nke anọ nke Xiaomi Mix nso. Qdị ọhụrụ a ga-ejikwa Qualcomm's Snapdragon 855, mana ọgbọ nke abụọ, yana 12 GB nke RAM na 1 TB nke nchekwa, 30w ikuku na-agba ọkụ ngwa ngwa na eriri 45w.
Batrị ahụ ga-eru 4.500 mAh, ọ ga-enwe mkpọchi isi, mgbawa NFC, sistemụ nchekwa UFS 3.0 na igwefoto anọ na azụ. Ihuenyo ahụ adịghị anya ma ga-iru mkpebi 2k. Ọ ga-ada ahịa na gam akporo 10 ahaziri na oyi akwa MIUI 11.
Nokia 9.1 Dị Ọcha
A na-akpọ nkwa nke Nokia na ọkwa dị elu Nokia 9.1 Pureview, ọnụ na na-emejọ kamera azụ ruru iseNke a, na tiori, ihe kachasị amasị ya maka ndị ọrụ chọrọ ogo na foto na vidiyo ha na-esi na njedebe ha. Dị ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọ ga-abụ, ọgbọ nke abụọ Snapdragon 855 ga-achịkwa ya ma ọ dịkarịa ala ọ na-enye anyị 8 GB nke RAM.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kedu ụwa telephony na-echere anyị n'etiti ugbu a na njedebe nke afọ
Nokia bụ ihe eji eme gam akporo nke meriri onye ndu n’ime ugboro ugboro